Uyikhusela njani ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwi-Intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje ukubonisa ukuba singababhali bomfanekiso, wokuzoba, umsebenzi obhaliweyo kunye nayiphi na enye into izinto ezixhonywe kwi- iwebhu, yinto ebalulekileyo, kuba ibonisa indlela elungileyo yokuzikhusela ekusebenziseni gadalala okanye ekusetyenzisweni gwenxa abanokukwenza.
La kwipropati yengqondo ayikho enye into engaphaya kwayo yonke into ethe yavela kwingqondo, kwingqondo yomntu; Inokuba kuyilo, ukubhala, umsebenzi, imodeli, prototype, njl.
1 Kuya kufuneka ukhusele umsebenzi wakho NJALO
2 Kutheni ubhalisa umsebenzi njengepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda?
3 Yintoni copyright malunga
4 Zimbini iindlela zokushicilela: ezokuziphatha kunye nezesizwe
4.1 Ilungelo lokushicilela
4.2 Iphepha lobunini lobunini
5 Ungayibhalisa njani ilungelo lokushicilela
Kuya kufuneka ukhusele umsebenzi wakho NJALO
Okwangoku nazo zonke iifayile ze- Itekhnoloji, ukusetyenziswa kothungelwano kunye newebhusayithi, ulwazi oluninzi luthunyelwe kwaye ludluliselwe kwezi ndlela ngaphandle kokuthathela ingqalelo ukuba kufuneka lukhuselwe ngokwaneleyo ukunqanda ukuphazamiseka kwixa elizayo.
Ngale nqaku, siza kuthetha kancinci malunga nayo njani kwaye nini ukukhusela ipropathi yethu enomgangatho ophezulu wokuqonda ibekwe kwiwebhu.
Kutheni ubhalisa umsebenzi njengepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda?
Zisuka nje, amalungelo omhlaba omsebenzi ivela ngexesha lokudalwa kwayo, emva koko kuyacetyiswa irejista yayo ehambelana nokubonelela ngokungagqibekanga a umhla wokudala kunye nokubhala okuhambelanayo; Ukuba into efanayo okanye efanayo yenzekile kamva okanye kamva, le rekhodi iya kuba luncedo kakhulu.
Yintoni copyright malunga
Nje ukuba ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ibhaliswe, ilungelo lifunyenwe ukuvumela okanye ukungasebenzisi umsebenzi nokuba kubhaliwe, ngumfanekiso, ukuzoba okanye enye into, ukubanga ukusetyenziswa kwayo ngendlela engeyiyo kunye nokufumana izibonelelo ezihambelana nokusetyenziswa kwemisebenzi yabo.
Yintoni egunyazisiweyo? Indlela eya kuthi ibhengezwe ngayo, isetyenziswe okanye itshintshwe ipropathi, ukuba iyasebenza.
Zimbini iindlela zokushicilela: ezokuziphatha kunye nezesizwe
Umbhali wolu hlobo lwepropathi enomgangatho wobukrelekrele yeyobomi, phantsi kwazo naziphi na iimeko ayatshintshwa okanye athengiswe kwaye awarhoxiswa.
Iphepha lobunini lobunini
Oku kwenzeka xa umntu wesithathu enemfuno okanye ukuzimisela ukusebenzisa umsebenzi ekufuneka bewenzile hlawula umbhali imali ayibekayo okanye ubambelele kwimiqathango yokusetyenziswa emiselwe ngumbhali wayo. Kwezi meko, amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda alahlekile emva kwexesha elithile.
Umzekelo, eSpain balahlekile iminyaka engama-60 emva kokusweleka kwe umbhali, ukusuka apho nabani na unelungelo lokusebenzisa umsebenzi ngaphandle komngcipheko wamabango, nangona ngethamsanqa zikhona iindlela zokubhalisa imisebenzi yengqondo, kubandakanya ngewebhu kukho izifundo kunye nezinto ezichazayo zokwenza inkqubo yobhaliso.
Kwiwebhu ngokukodwa sifumana amaqonga akhethekileyo apho kunokwenzeka khona ukwenza inkqubo yobhaliso simahla, nangona zikwabonelela ngeenkonzo ezinobunkunkqele ezinxulumene nobhaliso oluhlawulwayo.
Ngokwesiqhelo ubhaliso lwasimahla luya kuba ne- ukusikelwa umda kunxulunyaniswa nendawo Kuya kufuneka ukuba uxhome imisebenzi, ngokufanayo njengoko uzimisele ukuhlawula indawo eyongezelelweyo iya kunikwa ukuze ukwazi ukongeza imisebenzi emininzi njengoko ufuna.
Ungayibhalisa njani ilungelo lokushicilela
ukuba bhalisa amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwiwebhu, kuyakufuneka wenze iakhawunti ngokokufuneka eqongeni ngokweenkcukacha zomsebenzisi.
Emva kokwenza iakhawunti, ungaqhubeka ngokufaka imisebenzi, inani lezi linokuba nemida ethile enxulumene nemali yenyanga enokuthi iposwe, ukuba ubhaliso lwasimahla ngokuchasene Iirekhodi zentlawulo ziya kubonelela ngokuthamba ngakumbi kule nkalo kwaye ziya kubonelela ngezinye iinkonzo ezizodwa ezilungiselelwe iimfuno zomsebenzisi.
Ngokucacileyo zikhona ezinye iinkqubo kunye neendlela zokubhalisa ipropathi yakho enikezela ukhuseleko oluyimfuneko, nokuba yeyiphi kwezi oyisebenzisayo injongo efanayo, ukubonelela ngokhuseleko, ukukhusela ekusetyenzisweni gwenxa ngabantu besithathu, thintela amaxesha amabi kunye nokuphazamiseka kwikamva kwaye ufumane amalungelo okubanga, ukufuna, ukufumana imbuyekezo, uthathe isigqibo sokuba uza kusetyenziswa njani kwaye nini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyikhusela njani ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwi-intanethi
Imifanekiso yedijithali, iintlobo kunye neempawu
I-Psychology yombala kunye nokusetyenziswa kwayo kuyilo lwegraphic kunye nentengiso